बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सु’क्क-सु’क्क गरेर रु’न था’लिन ! – Life Nepali
बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सु’क्क-सु’क्क गरेर रु’न था’लिन !
बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क-सु’क्क गरेर रु’न थालिन – अबस्य पढ्नुस यो बास्तविक कथा !
मैले उनलाई अँगालोमा बाधे निधारमा चुम्बन गरे । मैले अँगालोमा बाध्दा उनले असहज भएजस्तो गरिन् । उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन पो थालिन् । सायद उनलाई घरको याद आयो होला मैले फेरि अँगालोमा राख्दै भने अब म तिम्रै हुँ । असहज नमान बिस्तारै सबै कुराको बानि बस्ने छ । उनी मलाई हेरेर मुस्कुराइन् । उनले अचानक आफनो हात मेरो निधारमा लगिन् र भन्न थालिन हजुरको निधार कस्तो तातो लौ ज्यान पनि तातो छ ज्वरो आएको जस्तो छ ।
Previous जालिम मुखियाले नै नेपाल भित्र्याएका थिए कोरोना संक्रमित ३ भारतीयसहित २४ धर्म प्रचारक
Next लकडाउनमा महिलालाई यस्तो अ’नौठो प्रस्ताव ! सुन्दा सबै चकित तपाई नी हेर्नुहोस् !